Rag Loo haysto Qaraxyo ka dhacay Kampala oo Maxkamad la horkeenayo – Radio Daljir
Juunyo 22, 2015 6:06 b 0
Isniin_22 ,2015(Daljir)_13 eedeysane oo lala xiriirinayo Qaraxyaddii Mataanaha ee shan sanno ka hor ka dhacay caasimadda dalka Uguanda ee Kampala ayaa la filayaa inay mar kale berrito ka soo hor muuqdaan Maxkamadda Sare ee magaalada Kampala.
Garyaqaanadda oo tiradooda dhan tahay 6 qof ayaa u gudbiyey Maxkamadda Sare inay ku qanacsan yihiin caddaymaha baaritaannadda lagu sameeyey Qaraxyaddii Mataanaha, iyadoo ay Maxkamadda soo bandhigtay baaritaano ay koox Dhaqaatiir ku sameeyeen maydadka.
Dhinaca kale, eedeysanayaasha ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen Is-qarxintii Mataanaha ee lala beegsaday taageerayaal daawanaysay ciyaartii Finalka ee K/Cagta Adduunka ee sannadkii 2010-kii oo lagu qabtay dalka Koonfurta Afrika.
Ciyaartaasi waxay u dhexeysay Xulalka Qaranka K/cagta ee dalalka Holland iyo Spain.
Xarakadda Alshabaab ayaa sheegatay inay ka dambeeyeen Qaraxyadaasi oo ay ku geeriyoodeen 76 qof oo ay ku jireen dad shisheey ah.